Sethula incwadi yethu yokufunda yesiJalimane kulabo abafuna ukufunda isiJalimane bebodwa, labo abangakhulumi noma yisiphi isiJalimane, nalabo abaqala nje ukufunda isiJalimane. Ungasebenzisa kalula incwadi yethu yesiJalimane esiyilungiselele njenge-E-Book kwikhompyutha yakho noma kwiselula yakho.
Incwadi yethu yesiJalimane iyincwadi yokufunda eyengeziwe eyenzelwe abafundi bezikole eziphakeme kanye nencwadi yokufunda yaseJalimane yabaqalayo yokufunda isiJalimane.
Incwadi yethu yokufunda yaseJalimane, eshicilelwe ngaphansi kwegama leWir lernen Deutsch (WLD), iyatholakala ukuthengiswa ku-Google Play Market.
Encwadini yethu yesiJalimane, izinkulumo ezithandwayo nezaziswayo ezinemininingwane neziqondakalayo ziyasetshenziswa. Njengoba ufunda incwadi yethu, uzoba nomuzwa wokuthi kukhona uthisha phambi kwakho. Incwadi yethu yokufunda yaseJalimane isekelwa ngokubukwa okuningana nezibonelo.
Incwadi yethu yesiJalimane ebizwa ngeWir lernen Deutsch (WLD) ingasetshenziswa yilabo abafuna ukufunda isiJalimane bebodwa, futhi ingasetshenziswa njengencwadi eyengeziwe yaseJalimane yabafundi bebanga lesi-9, ingasetshenziswa futhi njengencwadi yesiJalimane yabafundi bebanga le-10 ngoba ifaka phakathi izifundo zebanga le-10. Ingasetshenziswa njengomthombo osizayo futhi ofundisayo wabafundi bebanga le-11 nele-12 abanesizinda esingesihle saseJalimane.
QHAFAZA LAPHA UKUFUNDA UKUPHAWULA NGENCWADI YETHU
Labo abangayi kunoma yisiphi isikole noma kunoma iyiphi inkambo yaseJalimane bangasebenzisa kalula incwadi yethu yokufunda yaseJalimane ukuze bafunde isiJalimane bebodwa. Incwadi yethu ilungiselelwe nabantu abangakhulumi noma yiluphi ulimi lwesiJalimane futhi izifundo zaseJalimane ziqala ekuqaleni. Ngakho-ke, labo abasha ukufunda isiJalimane noma labo abangasazi isiJalimane bazokwazi ukufunda kalula isiJalimane encwadini yethu.
Ngokungafani nezinye izincwadi emakethe, incwadi yethu enemibala nezithombe inikeze ukubaluleka okubukwayo kakhulu. Incwadi yethu ilungiselelwe ukubheka labo abangakhulumi noma yiluphi ulimi lwesiJalimane, okungukuthi, labo abaqala phansi, futhi izinkulumo zethu zilungiselelwe ngendlela enemininingwane eminingi, ecacile neqondakalayo, kucatshangelwa labo abathathe izifundo zaseJalimane okokuqala ngqa.
OKUQUKETHWE INCWADI YETHU EYI-GERMAN
# OKUQUKETHWE INCWADI YETHU EYI-GERMAN
Tags: incwadi yesi-German, incwadi yokufunda yaseJalimane, incwadi yokufunda i-german, incwadi yokufunda yesiJalimane